Ergamtuunis kan Ergattu Qabdii? |
Home Afaan Oromoo Ergamtuunis kan Ergattu Qabdii?
Ergamtuunis kan Ergattu Qabdii?
Damee Boruutin, Guraandhala 28, 2019
OPDOn akka ijaarsati kan bu’ureesamtee booji’amtootan akeeka TPLF raawwachuuf akka ture seenaa fi Uummata Oromoo jalaa dhokataa miti. Bulchinsa TPLF wagga 27 jalatti hammeenyaa fi yakkaa TPLF adda duraan kan uummata keenya irraatti raawwataa ture OPDO dha. Hojii fokkisaa tahe hundaa kan hojjetaa ture OPDO gad aantuu akka tahe wal nama hin gaafachiisu miti.
Kan ilmaan Oromoo hidhuu fi hiisisu, ajjeessufi ajjeesisu, kan qabeenya Oromoo saamuu fi saamsisu OPDO dha. OPDOn waan ergamtuu taateef olaantummaan itti dhaga’amuu hin danda’u. Waan garaa ishee ittiin guutatu harca’aa TPLF yoo argate gammachuu guddaa dha. Akeekaa fi kaayyoo saba boonummaa irratti hundoofameen waan hin ijaaramneef maqaa Uummata Oromoon dhaadachuu malee Uummata Oromoof dhima baasuun itti hin mul’atu. Namni sammuu isaaf walabaa fi blisa hin qabne walabuummaa fi bilisummaa saba isaaf ni yaada jedhanii irraa eeguun gowwummaa dha.
Inni kaleessaa kan darbe. Kan har’a jiru ilaaluun waan kaleessa keessa dabarre akka hubannu nu godha. Isa fuula duraaf immoo akka mallannu nu gargaara. Kan seenaa fi biyyi lafaa raga bahu Qarree fi Qeerroon Oromoo kumaataman dhiiga isaanii lolaasanii harka qullaa bulchinsa TPLF Uummata Oromoo irraa buqqisan. Uummatni Impaayeera Itoopiyaa keessa jiru martuu akka hammeenya TPLF irraa nagaa argatu kan godhe dhiiga ilmaan Oromoo utuu tahee jiru har’a OPDOn akka ofii qabsoofte fidetti itti dhaadachaa jirti. Yaroo qaxxaamuraa kana keessa hixaa seenaa (historical accident) tahee biyyaa bulchuun harka OPDO itti kufee malee OPDOn waan fidde tokko hin jiru.
Rakkina guddaa OPDOn qabdu kaayyoo ijaarsaa ti. Har’as akkuma kaleessaa ergaa deemuu malee ofii murtfattee kaayyoo ittiin biyya kana ceesisuu dandeessu hin qabdu. Kanaafuu akka fincaan itillee irraa olii fi gad gaggalagaalaa bulti.Hojiin waliin dhaa’aa OPDO kun biyyaa Impaayera Itoophiyaa gara jeequmsaa oofaa jira. OPDOn ergaa nafxanyootaa guutuuf jecha mirga xixxiqqaa bara darban kana keessa uummatni qabsoo isaan argate harkaa gatuuf marxifattee hojjechaa jirti. OPDOn bakka TPLF olaantummaa Amharaa buufattee jalatti hoojjechuuf tattaafachaa jirti. Amharaa jalatti guddachuu miti jiraachunuu hin danda’amu. Amhaarri duraan dursee eenyummaa kee balleessu qaba. Akkaa ati afaan isaa, aadaa isaa, seenaa isaa fudhatee isa fakkaatee bultu barbaada.
Har’a biyyi maqaa Impaayera Itoophiyaan deebisanii yoo hin ijaarre Amharrii uummata buccuu tahee (minority) hafuuf deema. Kana dura warra eenyummaa isaanii balleessee ati Amhara jechaa ture dammaqee, of barree lakki an Amhara miti ittiin jechaa jira. Gonder kan Qimaanti yoo tahu Gojama immoo kan Agawoo fi kan Oromoo ti. Amharri biyya kan isaa dhiise ifatti kan Oromoo falmachaa jira. Maaliif biyya Oromoo falmachuun barbaachisa tahe? OPDO irraa fudhaachuun rakkina akka hin qabne waan hubataniif.
MNA magaalaa isaa Bahiir Daari Bishaan Abby agama itti dhiisee Finfinneen kan kooti jechaa jira. OPDOn waa’ee isaa amma dubbachuu hin dandeenyu jechaa jirti. Ijaarsi Oromoo waa’ee haqa Uummata Oromoo dubbachuuf sodaatu Uummata Oromoo bakka bu’a jechuun gowwuumaa dha. Maaliif yoo jenne sammuun OPDO sammuu boojuu ti. Uummata ishee aangomsuu fi of aangooo qabaachuuf dhaabbii fi kaayyoo ganamaa hin qabdu. Kononel Abiyi gaafa aangoo itti muudame akka akeeka Minilki bakkaan gahuuf hawwii qabu kaase ture. Akkuma jedhe saanaaf haa hojjetu malee Minilki uummata mpaayera Itoophiyyaa keessa jiraatu baayyee biratti jibamaa fi abaaramaa dha.
Akeekni Minilki uummata naannoo Gaanfa Afrikaa jiraatan humnaan cabsee akka Amhara jalatti bulan gochuu ture. Warra isaaf jilbeefachuu dide immoo harmaa fi harka irraa cirree adabuu danda’eera. Namni gocha Minilki faarsu kun Siidaa Minilki akka Anoolee irratti itti dhaabuuf mamii hin qabu. Uummata Oromoo keessa didaa fi fincilaa guddaa kan argate Uummata Oromoo Arsii keessa jiraatu irraa akka tahe waan seenaan raga bahu. Har’a ilmaan nafxanyoota maqaa Oromoo Arsii xurreessuuf OPDO keessatti mataa ol babbaafattu illee adda baafnee eenyummaa ishee beekna. Oromoon Arsii Goota. Bilisummaa isaaf gatii qaallii baasee ture. Har’as baasaa jira.
Amhaarri deebi’e Oromoo bituuf ayyaana argachuu ni danda’a laata? Milkaa’uuf shira xaxxaa jiru keessa tokko Oromoo wal itti buusuu dha. ABO siyaasaa biyyaa sanaa keessa baasuuf xiyyeefannaa guddatu jira. Kunis waan milkaa’uu hin fakkaatu. Maqaa araaraa fi Abbootii Gadaan WBO irratti duulli godhame doomeera. WBOn gantootaa fi bitamtoota tokko tokkoon waalluu salphinaa itti uwisee of irraa deebisee jira. Injifannoo cululuqaa gonfateera. WBOn hammam akka dammaqaa fi qophaa’aa tahe hojiin nu agrsiise. Baqalaa Gerbaa namni guddaan, qabsoo Uummata Oromoo hooggannuu ni danda’a jenne yaadnu gantuu fi ergamtuu tahee argame. Nuyii akka si hiikanii hirara baanee gaafanan waan nu hidhuu barbaadaniif gammoojjii Begii seene yaroo WBOn ittiin jedhu galatoomi jechuu irra dafii kootu harka kenni kunoo Horro irraa nama sadii malee hin hafne jedha. Namni guddaan ergamtuuf ergamaa tahee of xiqqeesse, nuunis nu qaannesse. Horiin yoo jiraate ergamtuunis nama ergachuu dandeessi jechuu dha.
An Jawwee irra wanan eegu hin qabu. Iji Jawwee fi lapheen Jawwee bakka horiin jiru jira. Horii barbaaduun Jawwee rakkina miti. Garuu dhiiga obbollewwan isaan yaroo tahu yakka guddaa dha. Mucaan kun hojii fokkisaa fi abaarramaa kana fakkaatu irraa dhaabbachuun dirqama. Warra akka Abbaa Gadaa durii Bayyanaa Sanbatoof RIB wajjin WBO adamsuu deeman Uummatni Oromoo maal jedha?
OPDO fi nafxanyoonni Uummata Oromoo akkuma durii tufaachaa jiru. Humni Waayyaannee buqqisee darbe sun har’as hinuma jira. Ummatni Oromoo Arba ciisu. Amma lafaa ka’u yaroo fudhachuun ni mala. Amma sana marsanii haa wacan. Lafa uummata Oromoo illee haa qircatan. Gaafa lafaa ka’uu garuu akka irra deemuu beekachuu qabu. Lafaa koo’uu Uummata Oromoo kan shakkan yoo tahe TPLF haa gaafatan. Amma sana garuu WBOn iyyuu afuura isaan hin baafachiisu. WBOn gaachanni Uummata Oromoo bara baraan haa jiraatu.
Previous articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 27, 2019
Next articleProne Amaro people hope OLF deal ends Guji attacks
anuma isuma March 1, 2019 At 3:47 am
Damee Boruu horii buli! Jarreen Nyaatanii Dhuguu fi Olanii Buluu malee dhumaatiin Ummata Oromoo dhaa isaaniif homaa iyyuu miti. Oromoon jabaatee walis jabeesee Qabsoo isaa haga Bilisummaatti itti finiinsuu dha!